Masar, Suudaan, Itoobiya oo guddi ku heshiiyey Biyaha muranka dhaliyay ee Nile – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Masar, Suudaan, Itoobiya oo guddi ku heshiiyey Biyaha muranka dhaliyay ee...
Masar, Suudaan, Itoobiya oo guddi ku heshiiyey Biyaha muranka dhaliyay ee Nile
Masar, Suudaan iyo Itoobiya ayaa dabayaaqadii jimcihii isku raacay in la sameeyo guddi khubaro xagga sharciga iyo farsamada ah oo ka kala socda saddexda dal si loo soo afjaro heshiis dhaqan gal ah oo ku saabsan shuruucda buuxinta iyo ka shaqeynta muranka dhalisay ee biyo xireenka weyn ee muranka dhaliyay ee Wabiga Nile.
Heshiiska waxaa la gaarey intii lagu gudajiray shir-yar oo fiidiyoow ah oo ka socda Xarunta Golaha Hoggaamiyayaasha Midowga Afrika iyo Dowladda si looga wada-hadlo GERD, ayuu af-hayeenka madaxtooyada Masar Bassam Rady ku yiri hadal uu soo saaray.
Shir-madaxeedka mini, oo uu shir-guddoominayay Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa, waxaa ka qeybgalay Madaxweynaha Masar Abdel-Fattah al-Sisi, Ra’iisul-wasaaraha Suudaan Abdullah Hamdok iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed.
Waxaa la isla gartay in laga fogaado in ay qaaddo tallaabo kasta oo mideysan oo ay ka mid tahay buuxinta biyo xireenka ka hor inta aan heshiiska la gaarin, Rady ayaa sidaas yidhi, isaga oo intaas ku daray in warqad loo diri doono Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay (UNSC) kaas oo ka hadli doona arrinta biyo-xireenka 29ka Juun.
Intii lagu gudajiray kulanka casriga ah, Sisi wuxuu iftiimiyay sida ay Masar u daneyneyso in la gaaro heshiis cadaalad ah oo isu dheellitiran “kaasoo u suuragelinaya Itoobiya inay ku guuleysato horumarka dhaqaale ee ay rajeynayso… iyada oo la tixgelinayo danaha waddamada durugsan, Masar iyo Suudaan, iyada oo aan waxyeello loo geysaneynin saamiyadeeda biyaha. ”
Guusha howshan waxay u baahan tahay ka go’naanta dhammaan dhinacyada in aysan qaadin wax tillaabooyin ah, ayuu madaxweynaha Masar xusay.
Bishii Juun 20keedii, Masar waxay codsi u dirtay UNSC hay’adda GERD, iyadoo ugu yeereysa hay’adda Qaramada Midoobay inay soo faragaliso “si loo muujiyo ahmiyada Masar, Itoobiya iyo Suudaan inay sii wadaan wadahadalada iyaga oo leh niyad wanaagsan.”
Tan iyo bishii Juun 9-keedii, saddexda waddan waxay qabanayeen kulanno fiidiyoow oo joogto ah oo ay kaga hadlayaan arrimo la xiriira buuxinta iyo hawlgalka hay’adda GERD iyadoo ay goobjoog ka yihiin saddex goobjoogeyaal oo ka socda Mareykanka, Midowga Yurub iyo Koonfur Afrika.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, wadahadallada saddex geesoodka ah ee ku saabsan xeerarka buuxinta iyo ka shaqeynta biyo-xireenka biyo-xireenka Itoobiya, oo ay ku jiraan kuwa ay martigelisay Washington, ma noqon wax miro dhal ah.
Itoobiya ayaa dhawaan sheegtay inay si dhakhso ah u bilaabi doonto buuxinta kaydka, inkasta oo ay Masar marar badan ka digaan talaabo kasta oo midaysan iyada oo aan heshiis saddex geesood ah la gaadhin.
Itoobiya waxay biloowday dhismaha GERD sanadkii 2011, halka Masar, oo ah wadan ka hooseeya webiga Niilka Basin ee ku tiirsan wabiga biyaheeda, ay ka walaacsan tahay in biyo-xireenku uu saameyn ku yeelan karo saami dhan 55.5 bilyan-mitir-cubic-mitir sanadkii.
Next articleRuwanda ayaa dishay afar nin oo hubeysnaa oo u dhashay Burundi, milateriga ayaa sidaas leh